“कुण्डलीमा ग्रह नक्षत्रको सिधा प्रभावको कारणले किन यी ४ राशि भएकाहरु एकान्त मन पाराउछ ?” – Krazy NepaL
September 19, 2021 133
मानिस’को कुण्ड’लीमा ग्रह नक्षत्रको’ सिधा प्रभाव पर्छ । जसले उनीहरुको जिन्दगीमा निकै प्रभाव पार्छ । यहि नक्षत्रको आधारमा हरेक मानिसहरुको राशि बनेको हुन्छ । जसले उनी’हरुको स्वभाव र उनीहरुको भविष्यको संकेत मिल्छ । धेरै मानिसलाई भिडमा बस्न मन पर्छ भने केहि यस्ता मानिस नि हुन्छन् जो एक्लै बस्न रुचाउने हुन्छ । जान्नुहोस् कुन राशिको मानि’सलाई मन पर्दैन भिड भाड:
१. मकर राशि: मकर राशि भएका मानिस’लाई एक्लै बस्न मनपर्छ। यी राशि ‘भएका मानिस अरुसंग घुलमिल हुन त्यति रुचाउदैनन्। किन कि यी मानिसको स्वभाव लजालु हुन्छ। यी राशिका मानिस आफुले पहिलादेखि नै चिनेको व्यक्तिहरु’सँग बस्न रुचाउछन्।
२. मिन राशि: एक्लै ब’स्नु यी राशी भएका व्य’क्तिको सबै भ’न्दा ठुलो बल हो। यिनीहरु दिनमा प’नि सपना देख्छन् र आफ्नै दुनियामा हराउछन्।
३. कर्कट राशि: यी रा’शि भएका व्यक्ति’हरुको थोरै साथी हुन्छन् र उनीहरुसँग नै बस्न मन पराउछन्। कोहि नचिने’को व्यक्ति यिनीहरुको नजिक आए भने यी राशि भएका व्यक्तिले अप्ठ्यारो महशुस गर्छन।
४. कन्या राशि: यी रा’शी भएका मानिस लजा’लु स्वभावका हुन्छन किनकि यो रा’शिमा ग्रह’ नक्षत्रको धेरै प्रभाब पर्छ । यिनीहरुलाई आफ्नै दुनियामा मस्त रहन मन पराउछन् । यी ‘राशि भएका व्यक्तिलाई आफ्नो घर बा’हेक अन्त बस्न मन प’र्दैन ।
Prevयस्ता संकेतबाट थाहा पाइन्छ तपाईकाे गर्भमा छाेरा छ कि छाेरी भनेर
Nextआज असाेज ४ गते साेमवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल
झुक्किएर पनि नसुत्नुहोस् यी ३ समयमा, नत्र रिसाउनेछिन् लक्ष्मी
भाइरस विरुद्ध खोप भनेर ८ हजार बढीलाई नुनपानी लगाइदिएको खुलासा
“जे माग्यो तेहि पूरा हुने मन्दिर फेला पर्यो ! यसरी निस्किन्छ अनौठो नाग देवता”
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (45043)
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23773)
चैत्र १ गतेबाट शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! (18440)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (16520)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (14701)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (13715)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12824)
सबैभन्दा कन्जुस हुन्छन् यी राशिका मानिस , तपाईको कुन राशि ? (12737)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (12615)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12237)
विहान उठ्ने वित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, हुँदैन् पैसाको कमी
महिलाले भुलेर पनि नलगाउनुहोस् यो दिशातर्फ फर्केर सिन्दुर, नत्र श्रीमानलाई आइपर्छ संकट !
जस्तोसुकै कालो खुट्टालाई पनि यसरी बनाउनुहोस् केही मिनेटमै गोरो र चमकदार